ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လစာအမြန်တိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ
6 Jan 2017 . 6:12 PM
တချို့တွေက အလုပ်တော့ ကြိုးစားပါရဲ့ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်တော့ လစာလည်း တိုးမလာဘူး၊ နောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြာတွေက လစာတွေတိုးသွားကြလို့ ကိုယ့်မှာ စိတ်ဓာတ်တွေကျတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က တစ်ယောက်တည်း အလုပ်တွေ ကြိုးစားတိုင်း လစာတိုးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကြိုးစားတာကို အလုပ်ရှင် သိဦးမှ လစာတိုးတာပါ။ တချို့တွေကျ ရာထူးတော့ တက်လာတယ်၊ လစာက မဆိုစလောက်လေး တိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ကို နဖားကြိုးထိုးလိုက်တာပဲ။ ကဲ . . ဒီတော့ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လစာတွေ တိုးပေးချင်လာအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာ လက်တို့ပြောလိုက်မယ်- လျှောက်တော့မပြောနဲ့ဦးနော်။
၁။ ပေါ်လွင်အောင် ကြိုးစားပါ။
လစာအမြန်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ ရာထူးတူတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က အမြဲတမ်းနှာတစ်ဖျားသာနေအောင် ကြိုးစားမှရမယ်ဗျ။ ပြီးတော့ အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာက ကိုယ်က သူများထက် နှစ်ဆမသာဘူးဆိုရင် နှစ်ဆပိုပြီး ကြိုးစားရမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အလုပ်ကို စောစောလာပြီး နောက်ကျမှ ပြန်တာမျိုး မကြာခဏ လုပ်သင့်သလို သူများထက်ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ ထုတ်ပြနိုင်ရင် လစာတိုးဖို့အခွင့်အလမ်းများနေပါပြီဗျာ။
၂။ ခေါင်းဆောင်ပါ၊ ခေါင်းမရှောင်ပါနဲ့။
အဟေးဟေး ၊ လစာတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အသင်းအဖွဲ့မှာ ဦးဆောင်လုပ်ပေတော့။ ကိုယ့်အနေနဲ့ Manager တစ်ယောက်မဟုတ်ဖူးဆိုရင်တောင် Leader တစ်ယောက်လို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို စိတ်အားတက်ကြွအောင် အားပေးစကားပြောတာမျိုးတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေ လုပ်ရမှာနော်။ အဲဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မသိသေးရင်သာ နေမယ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အသိအမှတ်ပြုနေလောက်ပြီဗျ။
၃။ ကွက်ကြားမိုး မရွာပါနဲ့။
တကယ်တော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆိုတာ တစ်လှေတည်းစီး၊ တစ်ခရီးတည်းသွားတဲ့ ဘဝတူတွေပါ။ အဲဒီတော့ အေးအတူ၊ ပူအမျှ ကရုဏာအပြည့်နဲ့ဆက်ဆံတာက အကောင်းဆုံးပဲ။ “အကို . . ညလေး နေမကောင်းလို့ ဖျားနေပြီထင်တယ် ဟင့်အင့်” လို့ စကီလေးက ခွင့်တိုင်လာရင် “အယ်. . နဖူးတွေတောင် ပူလာတာပဲ. . မှန်းစမ်း၊ ပါးလေးလည်း ပူနေတယ်နော်” ဆိုပြီး ဟိုစမ်းဒီကိုင် လုပ်ပေမယ့် “အကို ကျနော် နေမကောင်းဘူး“ လို့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ပြောလာရင် “မင်းက မြန်မြန်သေမှအေးမှာပဲ . အမြဲတမ်းချူချာနေတဲ့ကောင်” ဆိုပြီး ပြောလို့မရဘူး။ ကရုဏာဆိုတာ ကွက်ကြားမိုးရွာတာကို ပြောတာမဟုတ်ဖူးနော်။
၄။ သစ်ပင်လည်း ခုတ်၊ ပုဆိန်လည်း သွေး။
စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေရပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အတွက် ပညာရပ်အသစ်အဆန်းတွေ လေ့လာထားရမယ်ဗျ။ Career နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို အမြဲမပြတ်လေ့လာထားမှ တော်ကာကျမှာဗျ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ သစ်ပင်ပဲ ခုတ်နေတယ်၊ ပုဆိန်သွေးဖို့ မေ့နေတဲ့ သစ်ခုတ်သမားလို ခုတ်နိုင်တဲ့သစ်ပင်တွေ တဖြည်းဖြည်း နည်းလာမှာပဲ။ အဲဒီတော့ သစ်ပင်လည်း ခုတ်၊ ပုဆိန်လည်း သွေး။
၅။ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း။
ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါစေ ၊ အလုပ်ရှင်က အမြင်မကြည်ရင် လစာတိုးဖို့ မလွယ်တော့ဘူးနော်။ အဲဒီတော့ ခဏတာပဲ ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်ရှင်ကို အတက်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင်နေ။ “နှုတ်ချို သျိုတစ်ပါး” ဆိုသလိုပဲ စကားပြောရင် အဆင်ပြေအောင် ပြောပါစေ။ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းတဲ့ သဘောပေါ့။
ဘဝတူဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒီအချက်တွေအတိုင်းသာ လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် မကြာခင်မှာပဲ လစာတိုးလာမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း ရင်ဖွင့်ပေးသွားပါဦး။
တခြို့တှကေ အလုပျတော့ ကွိုးစားပါရဲ့ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတနျတော့ လစာလညျး တိုးမလာဘူး၊ နောကျမှပေါကျတဲ့ရှကွောတှကေ လစာတှတေိုးသှားကွလို့ ကိုယျ့မှာ စိတျဓာတျတှကေတြတျပါတယျ။ ကိုယျ့ဘကျက တဈယောကျတညျး အလုပျတှေ ကွိုးစားတိုငျး လစာတိုးတာမဟုတျပါဘူး၊ ကိုယျကွိုးစားတာကို အလုပျရှငျ သိဦးမှ လစာတိုးတာပါ။ တခြို့တှကြေ ရာထူးတော့ တကျလာတယျ၊ လစာက မဆိုစလောကျလေး တိုးလာတယျဆိုရငျတော့ အလုပျရှငျက ကိုယျ့ကို နဖားကွိုးထိုးလိုကျတာပဲ။ ကဲ . . ဒီတော့ အလုပျရှငျက ကိုယျ့စှမျးဆောငျရညျကို အသိအမှတျပွုပွီး လစာတှေ တိုးပေးခငျြလာအောငျ ဘယျလိုနထေိုငျရမလဲဆိုတာ လကျတို့ပွောလိုကျမယျ- လြှောကျတော့မပွောနဲ့ဦးနျော။
၁။ ပျေါလှငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
လစာအမွနျတိုးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျနဲ့ ရာထူးတူတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျလိုကျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဘကျက အမွဲတမျးနှာတဈဖြားသာနအေောငျ ကွိုးစားမှရမယျဗြ။ ပွီးတော့ အမွဲတမျးမှတျထားရမှာက ကိုယျက သူမြားထကျ နှဈဆမသာဘူးဆိုရငျ နှဈဆပိုပွီး ကွိုးစားရမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ဖွဈနိုငျရငျ အလုပျကို စောစောလာပွီး နောကျကမြှ ပွနျတာမြိုး မကွာခဏ လုပျသငျ့သလို သူမြားထကျပိုကောငျးတဲ့ ရလဒျတှေ ထုတျပွနိုငျရငျ လစာတိုးဖို့အခှငျ့အလမျးမြားနပေါပွီဗြာ။
၂။ ခေါငျးဆောငျပါ၊ ခေါငျးမရှောငျပါနဲ့။
အဟေးဟေး ၊ လစာတိုးခငျြတယျဆိုရငျတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ တကျတကျကွှကွှနဲ့ အသငျးအဖှဲ့မှာ ဦးဆောငျလုပျပတေော့။ ကိုယျ့အနနေဲ့ Manager တဈယောကျမဟုတျဖူးဆိုရငျတောငျ Leader တဈယောကျလို လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို စိတျအားတကျကွှအောငျ အားပေးစကားပွောတာမြိုးတှေ၊ လုပျငနျးခှငျမှာ ဦးဆောငျလုပျတာမြိုးတှေ လုပျရမှာနျော။ အဲဒီလို လုပျမယျဆိုရငျတော့ အလုပျရှငျက ကိုယျ့စှမျးဆောငျရညျကို မသိသေးရငျသာ နမေယျ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ အသိအမှတျပွုနလေောကျပွီဗြ။
၃။ ကှကျကွားမိုး မရှာပါနဲ့။
တကယျတော့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှဆေိုတာ တဈလှတေညျးစီး၊ တဈခရီးတညျးသှားတဲ့ ဘဝတူတှပေါ။ အဲဒီတော့ အေးအတူ၊ ပူအမြှ ကရုဏာအပွညျ့နဲ့ဆကျဆံတာက အကောငျးဆုံးပဲ။ “အကို . . ညလေး နမေကောငျးလို့ ဖြားနပွေီထငျတယျ ဟငျ့အငျ့” လို့ စကီလေးက ခှငျ့တိုငျလာရငျ “အယျ. . နဖူးတှတေောငျ ပူလာတာပဲ. . မှနျးစမျး၊ ပါးလေးလညျး ပူနတေယျနျော” ဆိုပွီး ဟိုစမျးဒီကိုငျ လုပျပမေယျ့ “အကို ကနြျော နမေကောငျးဘူး“ လို့ ယောကျြားလေးတဈယောကျက ပွောလာရငျ “မငျးက မွနျမွနျသမှေအေးမှာပဲ . အမွဲတမျးခြူခြာနတေဲ့ကောငျ” ဆိုပွီး ပွောလို့မရဘူး။ ကရုဏာဆိုတာ ကှကျကွားမိုးရှာတာကို ပွောတာမဟုတျဖူးနျော။
၄။ သဈပငျလညျး ခုတျ၊ ပုဆိနျလညျး သှေး။
စားဝတျနရေေးအတှကျ အလုပျလုပျနရေပမေယျ့လညျး ကိုယျ့အတှကျ ပညာရပျအသဈအဆနျးတှေ လလေ့ာထားရမယျဗြ။ Career နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ပညာရပျတှကေို အမွဲမပွတျလလေ့ာထားမှ တျောကာကမြှာဗြ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတျရငျတော့ သဈပငျပဲ ခုတျနတေယျ၊ ပုဆိနျသှေးဖို့ မနေ့တေဲ့ သဈခုတျသမားလို ခုတျနိုငျတဲ့သဈပငျတှေ တဖွညျးဖွညျး နညျးလာမှာပဲ။ အဲဒီတော့ သဈပငျလညျး ခုတျ၊ ပုဆိနျလညျး သှေး။
၅။ မခဈြသျောလညျး အောငျ့ကာနမျး။
ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလောကျပဲ စှမျးဆောငျရညျကောငျးပါစေ ၊ အလုပျရှငျက အမွငျမကွညျရငျ လစာတိုးဖို့ မလှယျတော့ဘူးနျော။ အဲဒီတော့ ခဏတာပဲ ဆကျဆံရတဲ့အလုပျရှငျကို အတကျနိုငျဆုံး အဆငျပွအေောငျနေ။ “နှုတျခြို သြိုတဈပါး” ဆိုသလိုပဲ စကားပွောရငျ အဆငျပွအေောငျ ပွောပါစေ။ မခဈြသျောလညျး အောငျ့ကာနမျးတဲ့ သဘောပေါ့။
ဘဝတူဝနျထမျးတှဟော ဒီအခကျြတှအေတိုငျးသာ လိုကျနာကငျြ့သုံးမယျဆိုရငျ မကွာခငျမှာပဲ လစာတိုးလာမယျလို့ ယုံကွညျမိပါတယျ။ လုပျငနျးခှငျမှာ ကွုံတှနေ့ကွေတဲ့ အခကျအခဲတှကေိုလညျး ရငျဖှငျ့ပေးသှားပါဦး။